मन्त्री बस्नेतद्धारा उदिपुर –रिठ्ठेबगर –नौथरशेरा सडकको अनुगमन - NewsNepal HD
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतद्धारा निर्माणाधीन उदिपुर–रिठ्ठेबगर–नौथर शेरा सडकको अनुगमन गर्नुभएको छ । बुधबार दिउसो मन्त्री बस्नेतले बेँसीशहर नगरपालिका वडा नं १ उदिपुरदेखि दोर्दी गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको प्रदेश सरकारले सबै पालिकाको केन्द्र सडकले जोड्ने लक्ष्यअनुसार यस गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने यस सडकको अनुगमन गर्नुभएको हो ।
उहाँले कालोपत्रे हुन लागेको यस सडकमा निर्माण भइरहेको विभिन्न खण्डअन्तर्गत उदिपुर, रामचोकबेँसी, चित्रेखोला लगायतको अनुगमन गर्नुभएको छ । यस सडक अनुगमन पश्चात् मन्त्री बस्नेतले यस सडकको काम सन्तोषजनक भइरहेको बताउँदै निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नलाई सम्बन्धित नियकालाई निर्देशन दिनुभएको छ । यस सडकको लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत उहाँले जनाउनुभएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रीसँगै अनुगमन गर्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले यस योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समन्वय भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । अनुगमनकै क्रममा मन्त्री बस्नेतको निजी सचिव डोलाराज पराजुली, पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यालय प्रमुख गिरीले भन्नुभयो, हालसम्म यस सडक कालोपत्रे गर्नका लागि यस सडकमा ग्याविन हाल्ने, टेवा, पर्खाल, कटिङको काम भइरहेको छ । हालसम्म १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उहाँको भनाई छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन यस सडक ७ दशमलव १२१ किलोमिटर कालोपत्र हुने भएको छ । सडकको लागत रु २६ करोड २९ लाख ६२ हजार २५१ रुपैयाँ रहेको छ । यस सडक कालोपत्रे, ग्याविन पर्खाल, पक्की नाली, हिमपाइप, सडक चौडाई गर्ने भएको छ । यस सडक निर्माणका लागि विसं. २०७७ असार ३ गते सम्झौता भएको थियो भने, सम्पन्न गर्नुपर्ने आगामी विसं २०७९ असार २ गते अर्थात् दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सडकको निर्माण कन्टेक निर्माण प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँले गरेको छ । त्यस्तै, आज नै दोर्दी गाउँपालिका वडा नं.४ मा निर्माणाधीन किसेदी मोटरेवल पुलको समेत मन्त्री बस्नेतले अनुगमन गर्नुभएको छ । मन्त्री बस्नेतले यस पुलको अनुगमन गर्दै यथासिघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नलाई ठेकेदारलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यस पुलको निर्माण व्यवसायी मिलन खड्काका अनुसार हालसम्म दुई तर्फकै फिलर उठाउने कार्य लगायतका काम सम्पन्न भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको २ करोड ४८ लाख रुपैयाँमा निर्माणाधीन यस मोटरेवल पुल विसं. २०७५ चैत १२ गते सम्झौता भएर काम अघि बढ्दै आएको छ । सम्झौता भएको मितिदेखि १८ महिनामा यस पुल सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन् । विविध कारणले काममा ढिलाई भएपनि हालसम्म ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ